I-PCB Technologies - iPandawill Technology Co., Ltd.
Ukongeza kuyo yonke imigaqo ye-PCB esemgangathweni esiyibonelelayo, iPandawill ikwanikezela ngenkqubo ezongezelelweyo ezinokuthi zisebenzise ukusebenza kweebhodi zakho zesekethe ngokunxulumene nokusetyenziswa kwazo, okanye zincede kwiinkqubo zebandla ezininzi zokunciphisa abasebenzi kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle.
Ukukhetha 'ukugoba ngegolide okunzima: Izicelo ezifuna amanqanaba aphakamileyo emphetho okanye uqhagamshelo lomphezulu kunye nokusetyenziswa kweminwe yegolide okanye iipads zokuxhuma.
Imaski ye-solder enokuchaphazeleka: I-Pandawill ibonelela ngeyona nqanaba liphezulu lentengiso elifumanekayo lokuthengisa imaski ye-solder ukuze isetyenziswe kwiinkqubo zokudibanisa ezininzi ze-thermal. Uluhlu lokuxhathisa olusetyenziswayo lusetyenziselwa ukugubungela iindawo ezingazukuthengiswa ngexesha lenkqubo ye-solder wave. Olu luhlu lubhetyebhetye emva koko lunokususwa ngokulula ukushiya iipads, imingxunya kunye neendawo ezinokuthengiseka kwimeko efanelekileyo yeenkqubo zesekethe yesibini kunye nokufakwa kwecandelo / lokudibanisa.
I-vias eziyimfama: Ukwenza uthotho, ukubhola i-laser kuphela koqoqosho, kodwa ingesiso isisombululo sobuchwephesha kuphela. Xa kusenziwa iprototyping, owona matshini wanamhlanje we-CNC (oomatshini) wokugrumba kunye nezixhobo ezizodwa ezintsha ziyafumaneka ukuvelisa imingxunya eyenziweyo yomgangatho olinganayo kunye nokusebenza kweendleko ngokulinganayo.
Vias ezizalisiweyo: Kukho iindlela ezininzi ezizalisiweyo ngokukhawulelana neemfuno zakho. I-Vias inokugcwaliswa nokuba kungokuncamatheliswa kwesinyithi kokuqhubekeka, i-epoxy resin yokusetyenziswa apho i-PCB yenza isithintelo esisebenzayo kwizicelo ezikhuselekileyo zangaphakathi kunye nobhedu olugcwalisiweyo ukunceda ngokuchithwa kobushushu phantsi kwezinto ezinxulumene nokudala ubushushu basekhaya ebhodini.
Shicilela iCarbon: Ikhabhoni isetyenziselwa ukunxibelelana kwebhodi yezitshixo kunye neLCD kunye nezikhonkwane zonxibelelwano. I-lacquer isekwe kwikhabhoni kwaye inokusetyenziswa ngokulula kumphezulu ngenxa yomxholo omkhulu wezinto eziqinileyo.
Impedance elawulwayo: Ukulawulwa okungafunekiyo ikakhulu kuyafuneka kwitekhnoloji ye-microwave, usasazo, icandelo lomkhosi kunye nonxibelelwano. Sisebenzisa kuphela izinto eziqinisekisiweyo kunye nolawulo lwe-dielectric rhoqo (iDk) kunye nelahleko ye-tangent / dissipation factor (Df) kwaye sikhuphe uvavanyo olufanelekileyo ukuze luhambelane neemfuno zesicelo sakho.